सत्य कुरा देशमा अस्पताल बनाएको भए हजारौं सीता बाच्ने थिए: ज्वाला सङ्ग्रौला
प्रचण्ड पत्नीको स्वास्थप्रति हाम्रो पनि चासो र चि’न्ता छ ! रोगसंग जोक र मजाक गर्नु हुन्न , यो सबैलाई लाग्न सक्छ ! तर हाम्रो भनाई यति मात्र हो की सत्ता र श’क्तिमा हॅुदा देशभित्रै एउटा राम्रो अ’स्पताल बनाईदिएको भए आज हजारौ
सीता दाहालहरुको नेपालमै उ’पचार सम्भव हुने थियो ! राज्यको स्रोतसाधन महंगा गाडी, बिल्डिङ र भ्र’स्टाचारमै स्वा’हा पारेर छेरपाटे चल्दा समेत नेता बिदेश जाने परिपाटीले जनता रि’साए भन्ने हेक्का हुन्छ कि हुंदैन यो देशका
शा’सकहरुलाई ? भर्खरै पश्चिमको यात्रा सकेर आउॅदै गर्दा हामीले ती भीरपाखामा दुईछाक भात खान सं’घर्ष गर्दै गरेका अनि सु’त्केरीमा राम्रोसंग स्याहार नपुगेर आङ खसेका हजारौ आमाहरुका पी’डालाई आखामा कै’द गरेका छौं! अनि हामीले
यो देशका स’त्ताका मान्छेहरुलाई प्रस्न गर्नै नपाउने हो र एउटा राम्रो अ’स्पताल किन बनाउन सकेनौ भनेर ? आज जतिपनि नेता अनि तिनका परिवारहरु बिदेश उप’चार गराउन जान्छन् नि, त्यो खर्चमा तपाइ हाम्रो र’गत पसिनाले भरेको कर र
बिदेशमा दु’ख गरेर पठाएको रेमिट्यान्सको थोपा थोपा जम्मा भएको छ ! हामी सोध्छौं, हामी प्रस्न गर्छौं, हामी र्या’ ख्रॅया_ख्ती पार्छौं , हामीलाई त्यो अ’धिकार छ , किनकी हामी सचेत युवा हौं! कसैका दा’स हैनौ..! आईन्दा बि’रामी
हुदा जुन नेता बिदेश जान तयार हुन्छ, त्यसलाई एयरपोर्टमै ए’रेस्ट गरेर नेपालका सरकारी अ’स्पतालका बेडमा भर्ना गर्ने अभियान चलाऔं युवा साथीहरु! नेताको ज्यान मात्रै ज्यान, नेताको प्राण मात्रै प्राण?? हामी जनता एक प्याकेट
जीबनजलको अभाबमा त’ड्पिएर कहिलेसम्म म’रिरहने? हामीले पनि बि’रामी हॅुदा उ’पचार पाउनु पर्छ! हामीले पनि हाम्रो आयुभर बाच्न पाउनु पर्छ ! नेता कुनै अर्को ग्रहबाट आएको प्राणी हैन ! ऊ हामीजस्तै मान्छे हो! ऊ त हाम्रो
सेवक हो! उस्लाई धेरै जी हजुरी गर्नु पर्दैन, उस्को जुताको नोकमा आफ्नो जिब्रो राख्नै पर्दैन ! जसरी असार साउनमा खेती गर्न गोरुलाई जोत्छ एक किसानले अनि गोरु ढिलो हिंड्यो , मेलो छोड्यो वा बस्यो भने पछाडीबाट लठ्ठीले
हिर्काउॅछ,त्यसरी नै देशको सेवा गर्छु भनेर आस्वासन बाडेर राज्यको भत्ता खाएको नेताले अल्छी गर्यो , बिकास गरेन र आफ्नोमात्र परिवारको भुडी पाल्नतिर लाग्यो भने आम नागरिकले सुझाव र आ’लोचनाको ल’ठ्ठीले हिर्काएर लाईनमा ल्याउनु पर्छ ! हो कि होईन युवा साथीहरु??